3 Nchekwa na Ndenye Ụzọ ndabere Samsung Galaxy S6 / S5
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Samsung Galaxy S6 Edge / S6 / S5
Nwere a Samsung Galaxy S6? Ohere inweta bụ na ị pụrụ iji ndabere ya iji zere ihe ọ bụla data ọnwụ mgbe ị tọgharịa factory, mgbọrọgwụ ya n'ihi na elu ùgwù, Flash a ROM ma ọ bụ nweta nkwalite ka a ọhụrụ ekwentị, dị ka Google Nexus 6. Ihe ọ bụla na-abia ị nkwado ndabere na mpaghara Samsung Galaxy S6 ma ọ bụ S5 , ihe kacha mkpa bụ otú iji mee ya. Isiokwu a gosiri na ị 3 ụzọ ndabere kọntaktị, ngwa, music, video, photos na ndị ọzọ si Samsung Galaxy S6 / S5.
Method 1. ndabere Samsung Galaxy S6 / S5 na Wuru na-ndabere App
Method 2. ndabere Samsung Galaxy S6 / S5 ka Computer na Professional ndabere Software
Method 3. Ugwu Your Samsung S5 dị ka a Flash Drive ime Samsung S6 / S5 ndabere
Ị ga-achọpụtala na e nwere wuru na-ndabere ngwa gị Samsung Galaxy S6 / S5. Site na iji ya, ị nwere ike ndabere ngwa, kọntaktị, SMS, MMS, kalenda, oku na ndekọ na foto ndị si gị Samsung Galaxy S6 / S5 ya SD kaadị.
Nzọụkwụ 1. On gị Samsung Galaxy S6 / S5, enweta ndabere ngwa.
Nzọụkwụ 2. Na ndabere ngalaba, enweta Data. Na-esonụ na ihuenyo, họrọ data ị chọrọ ndabere. Ị na-ekwe ka ndabere kọntaktị, SMS, MMS, kalenda, foto na oku na ndekọ. Mgbe ahụ, enweta Back elu. Na mmapụta dialog, tinye aha maka nkwado ndabere na mpaghara. Ma, nkwado ndabere na mpaghara a ga-aha dị ka oge ị ndabere. N'ikpeazụ, enweta OK. Nkwado ndabere na mpaghara faịlụ a ga-azọpụta na gị SD kaadị. Ya zọpụta ụzọ bụ ekwentị \_ ct_backup \_ backup_all
Nzọụkwụ 3. Go azụ ka ndabere isi ihuenyo, enweta Ngwa na nkwado ndabere na mpaghara ngalaba. Họrọ ngwa ọdịnala na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na enweta Back elu.
E nwere nza nke Samsung Galaxy S5 ndabere software, otu nke Wondershare MobileTrans guzo n'ihi na ya simpleness na oké uru. Nke a software na-enye gị ike ndabere ngwa, kọntaktị, SMS, oku na ndekọ, kalenda, music, video, foto gị Samsung Galaxy S6 / S5 na kọmputa mfe na were were. Dị na-agụ ndị na-esonụ nkuzi n'okpuru iji nweta ịghọta otú ndị software arụ ọrụ.
N'ihi na Mac ọrụ, i nwere ike ịgbalị Wondershare MobileTrans maka Mac, nke na-ahapụ gị ndabere ngwa, kọntaktị, ozi, video, photos, kalenda, music na oku na ndekọ si Samsung Galaxy S6 / S5 ka Mac na otu click.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Samsung Galaxy S6 / S5 ka Computer na-agba ọsọ MobileTrans
Nke mbụ niile, download na wụnye MobileTrans na kọmputa gị. Jikọọ gị Samsung Galaxy S6 / S5 na kọmputa site na iji eriri USB na-eme n'aka na ọ ga-ahụrụ site na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Do Samsung Galaxy S6 / S5 ndabere ka PC
Ke akpan window, pịa ndabere ekwentị gị. Nkwado ndabere na mpaghara window-abịa si, na ngosipụta niile ọdịnaya na ị nwere ike ndabere. Họrọ ihe ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara na pịa Malite Copy na-amalite. N'oge ndabere usoro, Akwụpụla gị Samsung Galaxy S5.
Mgbe ọ bụla ị chọrọ weghachi gị Samsung Galaxy S6 / S5, ị nwere ike ịga Weghachi si Backups na-ọdịnaya azụ.
Method 3. Ugwu Your Samsung S6 / S5 dị ka a Flash Drive Ime Samsung S6 / S5 ndabere
Dị ka ị na-ahụ, music, video, foto na akwụkwọ faịlụ na-echekwara na SD kaadị nke Samsung Galaxy S6 / S5. Ekele Android emeghe ọdịdị, ndị a ọdịnaya na-ọma inweta. Nkwado ndabere na mpaghara dị otú ahụ ọdịnaya, ị dịghị mkpa software ma a eriri USB. Gụọ ihe ndị na-esonụ ndị nduzi iji hụ otú ndabere Samsung S5 ka PC.
Cheta na: Ebe ọ bụ na Mac apụghị ịchọpụta Samsung S6 / S5, ị chọrọ nwụnye a obere freeware - Android File Nyefee gaa na-enyere gị aka efego Android dị ka a flash mbanye na Mac. Mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1. wepụ a eriri USB jikọọ gị Samsung S6 / S5 na kọmputa. Kọmputa gị ga-achọpụta rụọ gị Samsung S6 / S5 na-egosipụta ya dị ka a flash mbanye.
Nzọụkwụ 3. Site na ndabara, music, video na foto na-echekwa na Music, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Movies, Pictures nchekwa, kwekọrọ ekwekọ nchekwa, nakwa dị ka nchekwa kere site onwe gị. Documents bụ ebe ị na-azọpụta ha. Gaa ndị a nchekwa na idetuo gị chọrọ faịlụ na nkwado ndabere na mpaghara gị na kọmputa.
Ọzọ Isiokwu banyere Samsung ndabere
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Samsung Galaxy S4
Olee otú ndabere Samsung Galaxy S3
Nyefee na Ndi ana-akpo si Nokia ka Galaxy S3
Nzọụkwụ na Nkpọrọgwụ Samsung Galaxy S3
Olee otú Iji mgbọrọgwụ Samsung Galaxy S4
Top 10 Samsung ndabere Software na ngwa ọdịnala n'ihi Ị
Samsung Kies Review - Ọ Bụ N'AGBANYEGHỊ?
Otu mfe na Irè Way naghachi ehichapụ Photos si Samsung Galaxy S
> Resource> Samsung> 3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara Samsung Galaxy S5